Bible Mu Nsɛm Abran wɔ Asase So - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
SƐ OBI nam reba wo nkyɛn na ne tenten pem ɔdan atifi a, anka dɛn na wubesusuw? Saa nipa no bɛyɛ ɔbran ankasa! Bere bi a atwam no na abran wɔ asase so ankasa. Bible kyerɛ sɛ na wɔn agyanom yɛ abɔfo a wofi soro. Na ɛbɛyɛ dɛn na aba saa?
Kae sɛ na ɔbɔfo bɔne Satan gu so redi nsɛmmɔne. Na ɔrebɔ mmɔden mpo sɛ ɔbɛma Onyankopɔn abɔfo ayɛ bɔne. Bere bi akyi no abɔfo yi mu binom fii ase tiee Satan. Wogyaee adwuma a Onyankopɔn wɔ ma wɔn ɔsoro no. Wɔbaa asase so bɛyɛɛ wɔn ho te sɛ nnipa. Wunim nea enti?
Bible se nea enti ne sɛ Onyankopɔn mma yi huu mmea a wɔn ho yɛ fɛ wɔ asase so na wɔpɛe sɛ wɔne wɔn bɛtra. Enti wɔbaa asase so bɛwarewaree wɔn. Bible se eyi yɛ bɔne efisɛ Onyankopɔn yɛɛ abɔfo ma wɔatra ɔsoro.
Bere a abɔfo no ne wɔn yerenom wowoe no, na ɛsono saa mmofra yi. Mfiase no ebia na wɔnyɛ soronko pii. Nanso wɔkɔɔ so nyin bɛyɛɛ akɛse, na wonyaa ahoɔden kɛse, kosi sɛ wɔbɛyɛɛ abran.
Ná nnipa bran yi nye. Na esiane sɛ na wɔyɛ akɛse na wɔwɔ ahoɔden nti, wɔhaw nkurɔfo. Wɔbɔɔ mmɔden sɛ wɔbɛma obiara adi nsɛmmɔne te sɛ wɔn.
Na Henok awu, nanso na onipa biako wɔ asase so a oye. Na wɔfrɛ saa nipa yi Noa. Ɔyɛɛ nea Onyankopɔn pɛ sɛ ɔyɛ bere nyinaa.
Da koro Onyankopɔn ka kyerɛɛ Noa sɛ bere adu sɛ ɔsɛe nnipa abɔnefo nyinaa. Nanso na Onyankopɔn begye Noa, ne fifo, ne mmoa no pii nkwa. Ma yɛnhwɛ sɛnea Onyankopɔn yɛɛ eyi.
Bere a Onyankopɔn abɔfo no bi tiee Satan no, dɛn na ɛbae?
Ɛyɛɛ dɛn na abɔfo no bi gyaee adwuma a na wɔyɛ wɔ soro no baa asase so?
Adɛn nti na ɛyɛ bɔne sɛ abɔfo no baa asase so bɛyɛɛ wɔn ho te sɛ nnipa?
Dɛn na ɛmaa abɔfo mma no yɛɛ soronko?
Sɛnea wutumi hu wɔ mfonini no mu no, dɛn na abɔfo mma no yɛe bere a wɔbɛyɛɛ abran no?
Henok wu akyi no, onipa pa bɛn na ɔtraa asase so, na adɛn nti na Onyankopɔn pɛɛ n’asɛm?
Kenkan Genesis 6:1-8.
Dɛn na Genesis 6:6 da no adi fa sɛnea yɛn abrabɔ betumi ama Yehowa ani gye anaa ne werɛ ahow ho? (Dw. 78:40, 41; Mmeb. 27:11)
Kenkan Yuda 6.
Ɔkwan bɛn so na abɔfo a “wɔankora wɔn panyinni” wɔ Noa bere so no ma yehu sɛ ehia sɛ yɛyɛ ahwɛyiye nnɛ? (1 Kor. 3:5-9; 2 Pet. 2:4, 9, 10)